Ukukhathala. Ingabe uzizwa ukhathele futhi? Uzizwa ucansi oluthile olungenakuqondakala, uzizwa ukhululekile futhi unganaki. Lesi simo siphindaphindwa ngezikhathi ezithile, ikakhulukazi ngokusondela entwasahlobo. Lesi yisifo sokukhathala okungapheli, okuyinto, kuvela, sijwayele abantu abaningi. Namuhla sizoxoxa ngendlela yokunqoba isifo sokukhathala okungapheli.
Ukukhathala okungapheli nokujwayelekile kuyahluke ngokuphelele. Uma ukukhathala okulula kuyisimo esithatha umuntu isikhathi esithile, futhi sidlula ngaphandle kokulandelela, khona-ke ukukhathala okungapheli isimo sihluke ngokuphelele. Ngokukhathala okungapheli, ukugcinwa komuntu ngokomzimba, ngokomzwelo, nokwesaba, kuphelile. Ngaphezu kwalokho, kunendawo yokuqoqa, okuholela kamuva ekucindezelekeni. Ngisho noma uvumela ukuphumula nokuzwa imizwelo emihle, ukukhathala okungapheli akupheli nanoma ikuphi, kodwa kuhlanganisa kancane kancane. Khona-ke futhi ukuwohloka kwenhlalakahle kuza futhi yonke imizamo inikezwa ngobunzima obukhulu.
Ngingayitshela kanjani ukuthi une-syndrome engapheliyo? Khumbula ukuthi kaningi kangakanani uzizwa ungavumi, ukuthi akukho lutho lwekhonkrithi olungaguli? Izinyanga eziyisithupha zokugcina ngokuvamile zanele noma zihlale njalo? Khona-ke yilokho, loluhlobo lokukhathala, futhi yisikhathi sokuliphatha!
Ukuqala kubalulekile ngokubuyekeza indlela yokuphila. Zitholele isimo sengqondo esisha sengqondo esizosiza ukugwema izinkinga ezifana nokuphulwa kwemisebenzi yezitho zangaphakathi. Yazi ukuthi ukulwa akulindeleke ukuba kube lula, ngoba ukucindezeleka okungaphansi kokukhathala okungapheli kuyisitha esinamandla. Labo abathi akulona kunzima ukunqoba ukucindezeleka, akukaze kuhlangane nakho. Ngokuvamile, ukukhathala okungapheli kugxila abantu abadinga umsebenzi noma imisebenzi. Ungomunye wazo? Kuzodingeka sifunde ukuqeda ukungezwani kwethu kwangaphakathi, ukuhlukunyezwa okungaqondakali nokulungela njalo ukusebenza.
Ingabe uzwa amathiphu njalo "ungaphumuli" noma "uqoqwe"? Zilahle kude njengento eyingozi emzimbeni wakho ophelile. Njengoba usuqedile amandla okugcina ekugxilweni, ngeke uzizwe uhle. Kumele ufunde ukuzivumela ukuba uphumule futhi ube mnandi kakhulu. Ngezinye izikhathi ungayinaki umsebenzi wokusa. Isinyathelo esinzima kodwa esibalulekile ukuthatha iholidi noma ngisho nekhefu lokugula emsebenzini. Kwavela? Qala ukunamathela embusweni - ukulala, unike okungenani amahora angu-9 ngosuku, futhi isikhathi esithile, unike ukulala komsuku.
Ngezinye izikhathi uvuka uphinde uqaphele ukuthi uya endaweni ethile sekwephuzile. Akudingeki ukuba uphume embhedeni ngezikhathi ezinjalo. Imizuzwana embalwa ngeke isindise isimo. Kodwa ukuguqula ukucindezeleka kwegazi, ukushaywa umoya, nezinye izinkomba zesistimu zenhliziyo, yebo, kungakwenza kanjani, hhayi kangcono. Kodwa manje usenze ikhefu emsebenzini wakho futhi ulale. Ungangena ebhizinisini. Uhlobo luni? Kunzima kakhulu. Udinga ukuthola ukukhathala okumnandi emsebenzini womzimba futhi ufunde ukubekezelela. Thatha ukuhamba ngokushesha, ikakhulukazi ngaphambi kokulala. Uma nje ukushaya kwenhliziyo sekuye kwaba njalo, nciphisa umthwalo. Ngaphambi kokuhamba nangemva kwayo, fanisa ukushaywa kwegazi nokucindezelwa kwegazi. Ukunciphisa isikhathi samakilasi kuzoba, uma bebuyele kancane ngokujwayelekile.
Ngokuhamba okusheshayo, ama-endorphin akhiqizwa, noma ama-hormone enjabulo. Uthola injabulo nemizwelo emihle ngokukwazi ukunqoba umthwalo, ubuhlungu, ukuzwakalisa ukukhathazeka nokucindezeleka. Njengomvuzo wokubekezela kwakho nokuvumelana kwakho, ukucasula kancane kwezinga lokushisa kuncipha. Ebusika, ukuhamba okusheshayo kungashintshwa yi-skis. Lesi sifundo sihilela amaqembu angama-muscle engeziwe.
Uma kungabikho iqhwa, ungamane ulingise ukuhamba nge-skis: uthathe izinti ezimbili futhi ... vula umcabango, "ugijime esikhwameni." Kuyathakazelisa ukuthi i-skier iyakhathala kakhulu kunomuntu ohamba ngokushesha noma ogijima. Okungenani kabili ngesonto, hamba ukubhukuda. Umphumela uyamangalisa!
Futhi manje ufunde ukuzwa injabulo yemisipha neyomzwelo eyanikezwa inhlangano. Manje, futhi manje kuphela ungabuyela ejimini, okubhekwa njengento ejwayelekile.
Endaweni evelele, shiya isikhumbuzi mayelana nokuthi udinga ukufudumala. Ukubuyela ngokuqondile kuwo wonke amahora amabili. Ungazihlukumezi ngesinkimbinkimbi esinzima, kodwa yenza lokho okuthandayo. Uma izimo zikuvumela, zifudumale egumbini odongeni, phansi noma esihlalweni. Hlala, uphumule, ngenkathi uhambisa iminwe nezinzwane ezincane.
Ukunyakaza kubeka kahle kule nkinga inqwaba yemithi. Uhlelo lwakho lwezinzwa luzobhekana kahle ngaphandle kwabo. Ngaphandle kokwamukela i-Valerianum ebusuku noma ntambama i-tonic elula ye-tincture levzei, eleutherococcus, ginseng, umvini wama-Chinese we-magnolia (ayikho amaconsi angama-10).
Kungenzeka futhi lokhu kukhetho. Kungakhathaliseki ukuthi uzama kanjani ukulwa nesifo esingapheliyo sokukhathala, ihlaziya kancane kancane. Yebo, ungaphuza imithi. Kunoma yikuphi, lesi sifo asibheki njengento engelapheki. Kuphela amacala okubopha nsuku zonke kuzodingeka avuselele ukuhleleka. Okokuqala, kuqala. Kuthiwani ngemisebenzi yakho, izithakazelo, oxhumana nabo kanye nemihlangano kubalulekile ngempela. Kuzo futhi ugxilise amehlo akho. Futhi ziphikisana ukuthi ezikhathini ezidlule azikwazanga ukuthola isisombululo, manje ungakwazi ukuhamba kahle.
Futhi namanje kunezinkinga ezithwala kakhulu. Kufanele ihoxiswe. Noma bheka izindlela ezilula zokuzinqoba. Manje sekusemandleni akho, ngoba ukucindezeleka kuye kwavela kuwe, futhi amandla nokuqapha kwengqondo sekutholile umoya omusha.
Ngemva kokubhekana nokugula okunzima kangaka, ungawushiyi imikhuba ewusizo, kodwa "uhlaselwe" njalo. Ukwazi ukufunda ukujabulela ukuphila. Ungabuyeli esimweni sakho sangaphambilini, gcina umzimba wakho uphile.
Izakhiwo zokwelapha ze-birch sap
Indlela yokukhetha indawo yesikhala somntwana
Jamu kusuka kumantongomane anama-nut
Amaqanda agonywe nge-toast
Kanjani masinyane ukwenza inhlama yemvubelo?
Yini okufanele uyenze ukuze wenze imali ikuthande?
Umswakama wokudoba isisindo
Indlela yokupheka iphalishi ye-porridge?
Amabala aqoshiwe: imbangela yokubukeka
Amaski ekupheleni kwezinwele ekhaya
Ukwesaba njengento ebangela isintu
Ama-muffin ama-strawberry-lemon ane-ricotta